एसईई परीक्षा : तनावग्रस्त बन्यो २ नम्बर प्रदेश, ठाउँठाउँमा प्रदर्शन
निशान न्युज चैत्र १५, 2075
वीरगन्ज । शुक्रबारको एसईई परीक्षा रद्द भएपछि आक्रोशित परीक्षार्थीले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका कारण वीरगन्ज शुक्रबार तनावग्रस्त बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बैठकले प्रदेश २ मा सामाजिक विषयको परीक्षा स्थगित गरेपछि बिहानदेखि नै घण्टाघर चोकमा सयौंको संख्यामा जम्मा भएका परीक...
१० हजार अस्थायी शिक्षकले पाउने भए उपदान
चैत्र १३, 2075 काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले लिखित परीक्षामा असफल भएका १० हजार अस्थायी शिक्षकलाई उपदानसहित बिदाइ गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ५ अर्ब २५ करोड छुट्याएको छ । शिक्षा नियमावलीले कायम गरेको शिक्षक अनुपातअनुसार...
लोकसेवा बारे जान्नै पर्ने यी हुन् २५ ...
चैत्र १२, 2075 १. पृष्ठभूमि लोकसेवा आयोग नेपालको निजामती सेवामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्ने एक संवैधानिक निकाय हो । यसले निजामती सेवामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने, रिक्त पदको माग सङ्...
यसरी भाँती पुर्याएर पढेर लेखे लोकसेवा...
चैत्र १२, 2075 प्रश्नपत्र पाएपछि प्रश्नले के खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुने । सबैभन्दा पहिला प्रश्नले खोजेको विषयवस्तुको परिचय दिने । परिचयपछि मूलभूत विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा लेख्ने । १० नम्बरको प्रश्न हो भने १५ देखि २० वटासम्म मुख्य बु...
मावि तहका अस्थायी शिक्षकको निस्कियो न...
चैत्र ११, 2075 काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न मितिमा लिएकोे माध्यमिक तहका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ५ विषयको परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आइतबार माध्यमिक तहका सामाजिक, कम्प्युटर, संस्कृत, अर्थशास्त्र, कार...
आँट र आशाले यसरी फ्याट्टै अधिकृतमा ना...
चैत्र ११, 2075 अर्घाखाँचीमा जन्मिएको मैले सरकारी विद्यालयमा पढेको हुँ । बुबा शिक्षक थिए । त्यसकारण त्यतिवेला शिक्षणबाहेक अरू सरकारी सेवा हुँदैन भन्ने चेतना मभित्र थियो । निजामती सेवामा मैले चिनेको कोही थिएन । एसएलसी हुँदै १२ कक्षासम्म ग...
यो बिधी र तरिकाबाट अध्ययन गर्दै पहिलो...
चैत्र १०, 2075 काठमाडौं । पहिलो प्रयासमै शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल पूजा खत्री अहिले सर्बोच्च अदालतको उपसचिव हुन् । पहिलो प्रयासमै कसरी शाखा अधिकृत बन्न सफल बने ? पढ्नुहोस उनको अनुभब उनकै शब्दमा । ०६० सालमा भक्तपुरमा अवस्थित विद्याव...
विद्यावारिधि गर्ने ७ जनालाई पूर्व विद...
चैत्र १०, 2075 भक्तपुर । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित आदर्श माविको पूर्व विद्यार्थी समाजले विद्यावारिधि गर्ने ७ जना पूर्वविद्यार्थीलाई सम्मान गरेको । पूर्व विद्यार्थी समाजले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार आदर्श माविबाट एसएलसी पास गरी...
लोकसेवा तयारी गर्दा ध्यान दिनै पर्ने ...
चैत्र ९, 2075 योग्य र दक्ष जनशक्तिलाई निष्पक्ष रुपमा छनोट गरि सरकारी सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने र सरकारलाइ कर्मचारीको भर्ना पदोन्नती लगायत कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षमा कानुन एवं नीति निर्माणको क्रममा सुझाव दिनको लागि एक स्व...
नातावादको नमुना : ‘पारिवारिक विद्यालय...
चैत्र ४, 2075 महोत्तरी । विद्यालयमा एउटै परिवारका ५ जना शिक्षक छन् भन्दा अनौठो नमाने हुन्छ । किनकी महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–६ मगरथानास्थित नेवालाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय एउटै परिवारका सदस्यले जागिर खाने केन्द्र बनेको छ  । यो विद...
आंगिक क्याम्पसमा ३३ प्रतिशत महिला क्य...
फाल्गुन ३०, 2075 काठमाडौं । पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजारका महिला प्राध्यापक, महिला कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका देशभरीका आंगिक क्याम्पसहरुमा ३३ प्रतिशत क्याम्पसमा महिला क्याम्पस प्रमुखहरु बनाउन माग गरेका छन् ...
सेकरिड हार्ट एकेडेमीको अभिभावक दिवस स...
फाल्गुन २४, 2075 भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्तिवादी चिन्तनबाट अलग गराएर देश र समाजको सेवा गर्न विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनुपर्ने बताएका छन् । सेकरिड हार्ट एकेडेमीक...
एसईई दिने विद्यार्थीलाई दिइयो परिक्षा...
फाल्गुन २२, 2075 भक्तपुर । यसवर्ष एसईई परीक्षा दिने तयारीमा रहेका भक्तपुरका विद्यार्थीलाई परिक्षा कसरी दिने भन्ने विषयमा परामर्श दिइएको छ । युवा परिचालन गरी समाजमा व्याप्त रहेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहयोग पुयाउने उद्देश्यका साथ स्थापि...
टंगाल स्कुलका विद्यार्थीले गरे कलात्म...
फाल्गुन ४, 2075 काठमाडौं । काठमाडौंको हाडिगाउँस्थित टंगाल माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी गरेका छन् । उनीहरुले सो प्रदर्शनीमा राखिएका सामाग्री नेपालको राष्ट्रिय फूल गुराँस, राष्ट्रिय जनावर गाईको कलात्मक चित्र का...
जन्मदिन मनाउने पैसाले विद्यार्थीले गर...
फाल्गुन १, 2075 भक्तपुर । एभरेष्ट इंग्लिस स्कुलका विद्यार्थीले जन्मदिन मनाउने पैसा संकलन गरेर दुर्गम क्षेत्रका स्कुलहरुलाई पुस्तक सहयोग गरेका छन् । मिवाछें व्यासीस्थित एभरेष्ट इंग्लिस स्कुलका विद्यार्थीले जन्म दिन मनाउने पैसा संकलन गरेर ...
← अघिल्लो 12…67 8910 11 12 13 14 … 30 31 पछिल्लो →